Ingabe i-Youtube iphansi? Hlola Isimo Esibukhoma Njengamanje - Ungakwenza Kanjani
I-Youtube ingenye yezingxenyekazi ezinkulu ezithandwa kakhulu kulezi zinsuku. Sihlala sinethemba lokuthola umthamo wethu wansuku zonke wokuzijabulisa ngale nsizakalo. Kukunika ithuba lokuzwa okuqukethwe okuvela kuwo wonke umhlaba. Le webhusayithi imahhala ukuthi isetshenziselwe wonke umuntu. Kwesinye isikhathi ungabhekana nezinkinga ngamaseva we-youtube. Ukuxazulula le nkinga, sizobheka ukuthi ungathola kanjani ukuthi i-youtube iphansi.
Isixazululo salo mbuzo silula. Sicela ufunde umhlahlandlela wethu ukuthola ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-youtube yakhoisipiliyoni.
Ungahlola kanjani ukuthi i-YouTube ayisebenzi?
Abantu abaningi bangabhekana nezinkinga ngomhlinzeki wabo wesevisi ye-intanethi. I-YouTube yipulatifomu eyaziwayo eqhutshwa yiGoogle. Yikhasi langaphambili lamavidiyo akwi-intanethi. Ezokuzijabulisa ngeke zenzeke uma singakwazi ukusebenzisa isayithi. Kwesinye isikhathi ngenxa yezinkinga ezintsha, ungabhekana nezinkinga. Nazi ezinye izinyathelo zokubheka ukuthi i-youtube iphansi yini.
1. Isimo Sendawo Hlola
Kunamawebhusayithi amaningi online akuvumela ukuthi uhlole isimo sawo wonke amawebhusayithi. Amanye amawebhusayithi athandwa kakhulu afaka phakathi 'ingabe iphansi manje'. Ipulatifomu inesimo sawo wonke amaseva akwi-inthanethi. Noma ngubani angayisebenzisa ukuhlola imidiya yakhe. Amanye amawebhusayithi ambalwa ahlinzeka ngezinsizakalo ezifanayo.
Baxhuma i-database yamaseva amaningi aku-inthanethi. Ungaqonda futhi umlando wensizakalo yawo wonke amaseva.Lezi ngokuvamile yizinkundla ezenzelwe umphakathi. Isayithi libuyekezwa ngokuzenzekelayo njalo. Abantu baphinde banikele ngokufaka okudingekayo ukuze kufinyeleleke kalula. Isayithi likunikeza nokuhlaziywa kwezibalo kwedatha yeseva futhi.
Hlola Isimo Esibukhoma
Enye indawo edumile ekusiza ukuthi uthole ulwazi olunjalo yi-Down detector. Banikeza wena imininingwane ebalulekile yokuhlola ukuthi ngabe i-YouTube iphansi noma iyasebenza. Kuyisiteji esingasebenza kahle ngezidingo zakho zokuzijabulisa. Iwebhusayithi ingabhekana nezinkinga ezifundeni ezahlukahlukene.
Uhlelo lokusebenza lomtshina phansi kukusiza ukuthi wazi ukuthi yiziphi izindawo ezingakwazi ukusebenzisa i-Youtube. Izithameli zomhlaba wonke ze-YouTube zingazuza kakhulu ngale webhusayithi.
Lezi izindlela ezimbili ezilula zokugcina ipulatifomu ye-Youtube ihlolwe. Ungathola ukuthi ngabe nguwe wedwa obhekene nenkinga.
Ungaxazulula Kanjani i-Youtube Phansi?
Inkinga ingaxazululwa kalula ngokulandela imihlahlandlela eyisisekelo embalwa. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi awubhekene nale nkinga ngokwakho. Kuyinkinga esombululeka kalula. Ungalandela umhlahlandlela onikeziwe wokuxazulula inkinga.
Hlola ukuxhumeka kwakho ku-inthanethi:
Ukuxhumeka kwe-inthanethi imvamisa kuyisizathu esiyinhloko esenza ukuthi i-Youtube yakho ingasebenzi. Iningi labasebenzisi alikwazi ukuqala ukusebenzisa i-youtube ngenxa yale nkinga. I-ISP yakho idlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuthi amawebhusayithi owathandayo asebenza kahle. Sincoma ukuthi ubheke i-inthanethi yakho ngaphambi kokuthola amaphutha. Kusho ukuthi wonke amawebhusayithi akho azoyeka ukusebenza futhi.
Setha kabusha inethiwekhi yakho:
Amasethingi enethiwekhi ekhompyutha yakho angadlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuthi konke kuhamba kahle. Ungasetha kabusha amasethingi enethiwekhi yakho uma kunezinkinga zokuxhuma. Kuyasiza kakhulu ekuzijabuliseni okulula okufuna ku-inthanethi. Ungasetha kabusha inethiwekhi yakho ngokuya kuzilungiselelo zedivayisi yakho ethile. Kumishini ye-Windows, kulula ukwenza le nqubo. Kufanele uchofoze isithonjana sokuxhumeka kwe-inthanethi bese ushintsha izilungiselelo.
Lezi ngezinye zezixazululo okufanele uzame namuhla!
Izinkinga ezisezingeni eliphansi ze-YouTube ziyinto engajwayelekile. Uma lokho kwenzeka, abaningi bethu bangazizwa bephazamiseke impela. Kulo mhlahlandlela, sibheka ukuthi ungasihlola kanjani isimo. Ungathola impendulo ngokulandela lo mhlahlandlela. Sincoma wonke umuntu. Qala ukujabulela ukuzijabulisa okungenamkhawulo ngokusebenzisa
Bukela amavidiyo we-YouTube avinjiwe
landa imibhalo engezansi yesiNgisi yama-movie
izinhlelo zokusebenza ezifana nomenzi womculo
bukela i-bumblebee online putlocker yamahhala
bukela eyodwa hhayi yenziwe online
malini umfundi we-amazon ngonyaka
kukhona isaphulelo sabafundi se-amazon prime